Ama-cartridge we-YCF series enziwe nge-hydrophilic polyvinylidene fluoride PVDF ulwelwesi, okokusebenza kunokusebenza okuhle kokumelana nokushisa futhi kungasetshenziswa isikhathi eside ngo-80 ° C - 90 ° C. I-PVDF inokusebenza okuphansi kwamaprotheni adsorption futhi ifaneleka kakhulu kusixazululo sezakhi, izinto eziphilayo, ukuhlunga imigomo oyinyumba. Ngasikhathi sinye, inokusebenza kwezulu okuphansi nokuhambisana kwamakhemikhali jikelele.
I-YWF series cartridges filter filter media is a hydrophilic PTFE ulwelwesi, olukwazi ukuhlunga i-solvent solar solvent. Zinokuhambisana kwamakhemikhali komhlaba wonke, kusebenza ekuvinjelweni inzalo yamakhemikhali awuketshezi anjengama-alcohol, ama-ketone nama-esters. Njengamanje, zisetshenziswa kabanzi ekhemisi, ekudleni, embonini yamakhemikhali nakwezinto zikagesi. Amakhadibhodi we-YWF akhombisa ukumelana nokushisa okuhle kakhulu, angasetshenziswa kaningi ekuzinziseni umusi oku-inthanethi noma ekubulaweni amagciwane okuphezulu. Amakhadibhodi we-YWF nawo anokusebenza okuphezulu kokucabhela, isiqinisekiso esiphakeme, nempilo yenkonzo ende.
Ama-cartridges ochungechunge lwe-SMS enziwe nge-membrane ye-PES hydrophilic engenisiwe. Unokuhambisana kwamakhemikhali endaweni yonke, uhla lwe-PH 3 ~ 11. Zibonisa ukusebenza kahle okuphezulu, isiqinisekiso esiphakeme, nempilo ende yokusebenza, esebenza ekhemisi, ukudla, imboni yamakhemikhali, i-electronics, neminye imikhakha. Ngaphambi kokulethwa, igobolondo ngalinye lihlangabezane nokuhlolwa kobuqotho be-100%, ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwesihlungi somkhiqizo. Ama-cartridges ama-SMS ayabekezeleleka ekuphindaphindeni kwe-steam online noma nge-high-pressure disinfection.
Ama-cartridge we-HFS series enziwe nge-Dura series hydrophilic asymmetric sulfonated PES. Unokuhambisana kwamakhemikhali endaweni yonke, uhla lwe-PH 3 ~ 11. Zibonisa ukuphuma okukhulu, umthamo omkhulu wokubamba ukungcola, nempilo ende yokusebenza, esebenza ku-bio-pharmacy, ukudla & isiphuzo nobhiya, neminye imikhakha. Ngaphambi kokulethwa, igobolondo ngalinye lihlangabezane nokuhlolwa kobuqotho be-100%, ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwesihlungi somkhiqizo. Ama-cartridge we-HFS ayabekezeleleka ekuphindaphindeni nge-steam online noma nge-high-pressure disinfection, ahlangabezana nezidingo ze-asepsis zenguqulo entsha ye-GMP.
0,22 micron pes ulwelwesi ezifincizekile ezifana nesihlungi igobolondo esetshenziselwa amakhemikhali impahla eluhlaza
Ama-cartridge we-NSS series enziwe nge-Micro series hydrophilic asymmetric sulfonated PES. Unokuhambisana kwamakhemikhali endaweni yonke, uhla lwe-PH 3 ~ 11. Zibonisa ukudlula okukhulu nempilo yenkonzo ende, esebenza ku-bio-pharmacy nakweminye imikhakha. Ngaphambi kokulethwa, igobolondo ngalinye lihlangabezane nokuhlolwa kobuqotho be-100%, ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwesihlungi somkhiqizo. Ama-cartridge we-NSS ayabekezeleleka ekuphindaphindeni kwe-steam online noma nge-high-pressure disinfection, ahlangabezana nezidingo ze-asepsis zenguqulo entsha ye-GMP.
Ama-cartridge we-EBM / EBN uchungechunge enziwe ngenayiloni ye-hydrophilic yemvelo i-N6 ne-N66 ulwelwesi, kulula ukumanzisa, ngamandla amahle we-tensile nobulukhuni, ukuncibilika okuphansi, ukusebenza okuhle kokumelana ne-solvent, nokuhambisana kwamakhemikhali kwendawo yonke, ikakhulukazi efanelekayo kuma-solvents ahlukahlukene kanye nokuhlanganiswa kwamakhemikhali .
La machungechunge ama-cartridge wokuhlunga akhiwe nge-fiber enhle kakhulu yengilazi, ekhombisa umthamo ophakeme kakhulu wokubamba ukungcola, osebenza ekuhlungweni kwangaphambili kwamagesi neziphuzo. Ngenxa yamandla wokumunca amaprotheni we-ultralow, nawo asetshenziswa kabanzi ekhemisi ye-bio.